Okay Kid! ကလေးတွေအတွက် သတင်းအချက်အလက်၊ ကလေးတွေရဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စုစည်းတင်ဆက်ပေးမယ့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
Critical Thinking သင်ကြားမှုတွေနဲ့ ဖောင်တော်ဦး ဘကကျောင်း
1436 May 30, 2017
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် မန္တလေးမြို့က ဖောင်တော်ဦး ဘကကျောင်းလေးကို ရွေးချယ်ခံရပါတယ်။ အထက်တန်းအဆင့်ထိ တွဲဖက်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဖောင်တော်ဦး ဘုန်းတော်ကြီးပညာရေးကျောင်းဟာ ဘယ်လိုကျောင်းမျိုးလဲ? ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကို ကမ္ဘာ့ဆရာဆုလျာထားခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ဖောင်တော်ဦးကျောင်းမှာ ကလေးဗဟိုပြုသင်ကြားရေးစနစ်ကို ဘယ်လိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေသလဲ? အခုခေတ်ကမ္ဘာမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးလာတဲ့ critical Thinking စွမ်းရည်တွေကို အဲဒီ့ကျောင်းက ကလေးတွေဆီမှာ ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ပေးနေသလဲ? ဖောင်တော်ဦး ဘကကျောင်းလေးအကြောင်းကို လူငယ့်အသံမှာ တင်ဆက်ထားပါတယ်။ DVB Youth Voice – 30.05.2017
Myanmar Idol Top-3 ၊ ကျောင်းသားသင်္ကြန်ပွဲတော် လူငယ့်အသံ
1650 March 15, 2017
– မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဂီတပရိသတ်တွေအကြားရေပန်းစားနေတဲ့ Myanmar Idol Season 2က Top3သုံးယောက်ရဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲ ပြုလုပ်သွားတဲ့ သတင်း။ – ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းဝင်းထဲမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ပြုလုပ်သွားတဲ့ ကျောင်းသားသင်္ကြန်ပွဲတော် သတင်းမြင်ကွင်း။ – ကျူးကျော်ရပ်ကွက်ကနေ ခရီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက် လည်ပတ်စရာနေရာဖြစ်လာတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ဂျိုဒီပန်ရွာအကြောင်း။ DVB Youth Voice – 15.03.2017
YBS ယာဉ်လိုင်းစနစ် အပြောင်းအလဲ စေတနာ့ဝန်ထမ်း လူငယ်များ အခန်းကဏ္ဍ
991 January 20, 2017
– ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ယာဉ်လိုင်းစနစ် အပြောင်းအလဲ ကာလမှာ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ လုပ်အားပေးပါဝင်ကြတဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ။ – နယ်မြို့ရပ်ရွာတွေက ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်တွေမှာ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ လာရောက်ဖတ်ရှုမှုနှုန်း မြင့်မားလာစေဖို့ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေ။ – ကျောင်းပြင်ပ မူလတန်းပညာရေးစနစ် ကျင့်သုံးနေတဲ့ ရွှေပြောင်းဒေသကျောင်းတွေမှာ ရှေ့ လာမယ့် စာသင်နှစ်တွေအတွက် အခက်အခဲတွေရှိ။ – ကြက်နှစ်ကို ကူးပြောင်းမဲ့ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်မှာ သက်သက်လွတ် အသီးအရွက် တွေစားကြဖို့ တိရိစ္ဆာန်အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေ လှုံ့ဆော်မှုပြုလုပ်။ DVB Youth Voice – 20.01.2017
လူငယ်ထဲက လူငယ်တွေအကြောင်း လူငယ့်အသံ
1049 January 18, 2017
– ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ ပြည်သူတွေက စစ်ပွဲတွေအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ပေးဖို့ လူထုပါဝင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပြုလုပ်သွားမယ့် သတင်း။ – လူငယ်တွေထဲကလူငယ်တယောက်၊ နိုင်ငံအတွက် ဆုတံဆိပ်တွေ ဆွတ်ခူးပေးနိုင်တဲ့ ကရင်တိုင်းရင်သူ ကာယအလှမယ် နန်းထက်ထက်လင်းရဲ့ ဘ၀ပုံရိပ် – အိန္ဒိယလူငယ်တွေအမြဲလိုကစားနေတဲ့ Cricket ကနေ တခြားကစားနည်းတွေ စိတ်ဝင်စား လာဖို့ ကစားနည်းသစ်တွေ မိတ်ဆက်သင်ကြားပေးတဲ့အကြောင်း ဒီဗွီဘီ လူငယ့်အသံ ဇန်န်ဝါရီ ၁၈ ရက်နေ့ အစီအစဉ် DVB Youth Voice – 18.01.2017
လက်ပံတန်း လူငယ်လေး(၃)ယောက်အဖွဲ့ရဲ့ သရီးဒီ ပန်းချီ ပုံရိပ်
1174 January 10, 2017
ငယ်စဉ်ကတည်းက ပန်းချီပညာရပ်တွေကို ၀ါသနာပါလို့ လေ့လာရင်းနဲ့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရာ သရီးဒီ ပန်းချီ ပုံရိပ်တွေကို ဖော်ထုတ်လာနေကြတဲ့ လူငယ်တွေရှိကြပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ လက်ပံတန်းမြို့က လူငယ်လေး ၃ယောက်ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့လေးတဖွဲ့ကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ရိုက်ကူး – ၀ဏ္ဍထွန်း DVB Youth Voice – 10.01.2017
DVBYV – ငြိမ်းချမ်းရေး စာပေ ဟစ်ဟော့နဲ့ လူငယ့်အသံ အစီအစဉ်
1664 October 25, 2016
– တိုင်းရင်းသားဒေသတချို့မှာ လတ်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ရပ်တန်စေဖို့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ဆန္ဒထုတ်ဖော် တောင်းဆိုမှုတွေ ပြုလုပ်လာကြတဲ့သတင်း။ – လူငယ်တွေအတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ စာပေဟောပြောပွဲတခုကို ဒူးပလားယားခရိုင်အတွင်း တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ လေးကေ့ကော်မြိ်ု့သစ်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပသွားတဲ့သတင်း။ – ဘရာဇီးနိုင်ငံက အသက်(၁၂)နှစ်အရွယ် ဟစ်ဟော့ကြယ်ပွင့်အကြောင်း လူငယ့်အသံ သတင်းတွေကို စုစည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။ DVB Youth Voice – 24.10.2016